Filannoo 2015 fi kallattii xiyyeeffannaa miidiyaalee addunyaa - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Filannoo 2015 fi kallattii xiyyeeffannaa miidiyaalee addunyaa
Filannoo 2015 fi kallattii xiyyeeffannaa miidiyaalee addunyaa
Yaada: Abdii Gammachuutiin
Duulli nafiladhaa filannoo biyyoolessaa 2015 akka itti fufetti. Socho’uun, duula nafiladhaa irratti bobba’uun kuni dhimma gufuu malee adeemaa jiru jechuun hindanda’amu. Komiifi qeeqni dhaabbileen mormitootaa yeroo gara garaatti dhageessisaa jiranis kanuma mirkaneessa.
Rakkooleen dhimma kabajamuu dhabiinsa mirga namoomaatiin wolitti hidhata qabaniifi dhiphina dirree dimokraasii osoo duulli nafiladhaa hineegalins turan. San booda ammo yoo hammaataniifi daran dhiphatan malee waan fooya’iinsi sona qabu argame tokko hinfakkaatu. Ta’us akkasumatti obsaafi garaa-kutannaan, hedduun paartilee mormitootaa, filannotti seenuuf kan qophaayan fakkaata.
Lola injifataan durumaa beekamu tokkotti wonti seenamuuf hinjiru; biyya heddutti. Dhugaan Itoophiyaa adda ammoo. Paartiin angoo irra jiru akka moo’atu dhibbaan-dhibbatti osoo beeku falmii filannoo seena. Worri mooraa mormituu keessa jiranis injifatamuu qofaa mitii akka macaraffaman qajeelatti osoo hubatan, humnas dhaban onnee waan qabaniif jecha, dirree filannoo reeffaan malee injifannoon irraa galuun hinyaadamnetti shamizaafi kofoo oldeeffatanii seenan. Hangamuu fokkisaa ykn raajessaa ta’us, kuni dhugaa siyaasa Itoophiyaati garu.
Filannoo bara kanaa eenyutu injifata waan jedhu irratti taajjabdoota biyya keessaafi biyyaan ala jiraatan biratti woldhabdeen yaadaa tokko hanga ammaatti hinmul’anne; hanga ani hordofetti. Hundi kan dubbatan, sanuu afaan guuttatanii, EPRDF injifannoo guddaa akka gonfatuudha. Paartileen mormitootaa 50 ol ta’an barcuma paarlaamaa EPRDF tarii tarsiimoof jecha gadi lakkisuu malu 20 ykn 50 irratti kan wolfixaa jiran worri jedhan jiru. Sunumtuu hangam akka dhugaa ta’e ammatti wonti beekamu hinjiru. Dhuma irratti bu’aan filannoo kanaa akka isa 2010 %99.6 ta’uus nimala. Kunis kan ta’uu maluuf, woggaa 24 booda EPRDF keessaa wanti ummanni ykn hawaasni adddunyaa maal naan jedha jedhu guutummatti haqamuu isaatiif. Ammaaf hundi yaada; tilmaama xiinxallitootaati. Hanga bu’aan filannoo Woxabajjjii keessa ifa ta’utti, tilmaamuun alatti, wonti dhugaafi ragaa irraa maddu kan irraa dubbatamu hinjiru.
Filannoo 2015 akkuma isa kana dura turanii miidiyaaleen addunyaa faanaa bu’utti jiru. Barreessu, gabaasu, waan arganiifi dhagayan irraa odeeessu. Duula nafiladhaas taajjabu. Waan adeemaa jiru, hanga tokkos ta’ u, quba qabu. Duumessa sodaa, cinqaafi doorsisaa hangam ulfaataa ta’e (isa EPRDF uume) jalatti paartileen mormitootaa akka socho’aa jiran irraas gabaasu. Waan isaan gabaasaniifi marsaa qunnamtii isaanii kan qajeelatti taajjabeef wonti tokko ifa. Innis irra jireessatti burqan odeeffannoo isaaniitiifi kallattiin xiyyeeffannaa gabaasa isaanii Paartii Samaayaawii ta’uu isaati. Kuni rakkoo ykn hir’inna mataa isaa qaba.
Akkamitti akka ta’e anaaf ifaa miti. Xiyyeeffannaan miidiyaalee biyya alaa waan EPRDF irraa hafeen gara Paartii Samaayaawiitti. Waa’ee yaada gama mooraa mormitootaatiin jiruuf, hundi jechuun nidan’adamaa (Al Jazeera, DW, VOA, BBCfi kanniin biros), kan hasayaniifi gabaasan waa’ee Paartii Samaayaawitiifi ilaalacha isaaniiti. Paartiin Samaayaawii dubbi-himaa ykn itti gaafatamaa dhimma qunnamtii paartilee/mooraa mormitootaa kan ta’e isa fakkeessa. Kuni maaliif ta’e? Akkamitti ta’e ammoo? Paartileen mormitootaa kuuwwan keessattuu Medrek, paartiin gamtaa paartilee hedduufi muuxxannoo yeroo dheeraa, eessa dhaqe? Osoo Medrek eessa jiru Samaayaawiin hangas hariiroo isaa miidiyaalee biyya alaa oo’ifate, qunnamtii isaa isaan wojjiin tolfate?
Hariiroofi michummaa miidiyaalee worra dhihaa wojjiin tolfachuufi filannoo EPRDF abbaa itti ta’e moo’achuu jidduu ammatti wolitti dhufeenyi tokkollee hinjiru ta’a. Ammas miidiyaalee kanniiniin wolitti dhiyaachuun shoorri inni gama ummata biyyaa irraa deeggarsafi jaalala horachuu irratti qabu hinjiru ta’a. Barbaachisummaan miidiyaalee kanniinitti dhimmabayuudhaan kaayyoo dhabbataniifi dhiibbaa isaan irra jiru, doorsisaa deeggartoota isaanii mudatu, ijaafi gurra addunyaa biraan gayuun maaliif isaanitti hinmul’atu garuu? Medrek faati tarsiimoo rakkoo hawaasa falmaniif mudataa jiru addunyaa quba qabsiisuu hinqabanii? Yoo niqaban ta’e, akkamitti dhugoomsuun danda’ama bakka hiree amma filannoon wolqabatee uumame kanatti dhimma hinbayan yoo ta’e?
Gama miidiyaa addunyaa ufitti hawachuutiin, Paartii Samayaawii yoo hintaanee, paartileen mormitootaa hedduun isaanii dadhabbii qabaachuu isaaniiti kan natti mul’atu. Qaawwalli ykn dadhabbiin kuni akamitti akka uumame kan beekuufi deebiis laatuu qabu isaanuma. Ammaaf garuu morkii xiyyeeffaannaa miidiyaa addnuyaa argachuuf jidduu partilee mormitootaatti godhamuun, tarii jira yoo ta’e, Paartiin Samaayaawii hundarratti ol’aantummaa argateera. Miidiyaa Paartii Samaayaawii osoo hinqunnamne hanga ammaatti heddu hinargine; hinjiru jechuun nama dhibus.
Paartiin Samaayaawii waa’ee hadhaa jireenyaa ummanni bulchiinsa amma jiru jalatti dhadhamaa jiruu ijaafi gurra hawaasa addunyaa biraan gayuun isaa rakkoo hinqabu. Rakkoon kan jiru akkaataa rakkoon Itoophiyaa keessa jiru itti ibsamuufi yaada furmataa jedhanii waan isaan dhiyeessan irratti. Hedduu hawaasa Itoophiyaatiif rakkoon Itoophiyaa keessa jiru inni Samaayaawiin rakkoodha jedhu rakkoo ta’uudhabuun nimala. Rakkoo yoo ta’es tarii rakkoo ammatti xiyyeeffannaa guddaa barbaadu ta’uu dhabutu mala. Gama biraatiin wonti rakkoo kanniiniif Samaayawiin furmaata jedhaa miidiyaa addunyaatti odeessu inumaa rakkoo ta’utu mala- namoota taokko tokoof. Kanaaf rakkoon Itoophiyaafi falli rakkoo isii akka ilalachaafi amantaa Samaayaawitti dhiyaachuun paartilee mormitootaa biroof rakkoo qabaachuun nimala; keessattuu worra mooraa Oromoo keessa jiraniif. Kanaaf yaadaafi dhimmi isaaniis kan gurra hawaasa addunyaa bira gayuun barbaachisaa ta’uuf.
Rakkoon Itoophiyaafi falli rakkoo kanaa waan akka yaadaafi amantaa Paartii Samaayawiitti qofa addunyatti labsamuu miti. Wonti rakkoodha jedhamaniifi falli isaaniis heddu. Kanaaf mooraa mormitootaa keessatti paartileen hangas heddummaatan. Yaanni kunniin, hundas ta’uu batu, irra jiressatti dhagayamuu qaba; hawaasa addunyaa biratti. Kuni kan ta’u yoo dirreen guutumatti Paartii Samaayawiitiif gadi lakkifamee miti. Isaan hafanis dammaqanii, carraaqanii hiree kanatti bayuu qabu. Hunda irra ammo imaammataafi tarsiimoo miidiyaa, kessattuu isa miidiyaalee addunyaa gurguddaa ittiin hawatan, qabaachutu isaan irraa eegama. Kuni hinta’u taanaan, akkuma kana duraa, miidiyaalee addunyaa irraa dhagayuuf kan deemnu sagantama siyaasaa EPRDF fi Paartii Samaayaawii ta’uuf deema. Jibbaa isaanii qofaaf miti kuni. Irra deddeebi’amee sagantaan siyaasaa paartilee lamaan kanninii labsamuun ilaalchaafi hubannoo hawaasa addunyaa bocuu irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Kuni paartilee ykn namoota yaada paartilee kanniin lamaaniin ala ta’e qaban biratti, gara funduraatti, kasaaraa diploomaasii guddaa uumuun nimala.
Filannoo injifatanii jijjiiraa mootummaa fiduun silaafuu waan hinfakkaanne. Qilleensa bubbisaa jiru kanatti fayyadamanii kayyoofi rakkoo sabichaa ijaafi gurra hawaasa addunyaa biraan gayuun tarii bu’aa guddicha filannoo kana irraa qooda fudhachuun argamsiisuudha; akka hubannaafi amantaa namootaatti. Kana godhuu dadhabuun ammoo waan huda dhabuun akkamitti akka gargara bayu namaaf hingalu.
OFCf hiree gaarii!
Previous articleNews24: Ethiopia to be put to the test in general election
Next articleBaqattoonni Itoophiyaa 250 mana hidhaa Tanzaaniyaa keessatti dararamaa jiru